XOG: Kumanaan Askari oo katirsan Milateriga Itoobiya, kuna sugnaa gudaha Soomaaliya oo deg deg loo saarayo. – Puntlandtimes Hoyga Wararka Somalia
XOG: Kumanaan Askari oo katirsan Milateriga Itoobiya, kuna sugnaa gudaha Soomaaliya oo deg deg loo saarayo.
November 14, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 4
JIGJIGA(P-TIMES) – Boqolaal kamid ah ciidamada dawladda Itoobiya oo kusugnaa magaalooyinka kuyaala Koonfurta & Bartamaha Soomaaliya, laguna xoojinayay howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM ayaa ka baxaya gudaha dalka, maalmaha nagu soo aadan sida ay shaacinayaan xogaha laga helayo dhinacyada Amniga ee gudaha.
Ciidanka ugu badan ayaa ka huleeli doona magaalooyinka Halgan oo katirsan gobalka Hiiraan, Gedo & Baydhabo, halkaas oo ay ciidamadaas u joogeen xoojinta ciidamada AMISOM katirsan ee Itoobiya kuna sugnaa goobahaas.
Tiradda la xaqiijiyey in ay ka baxayaan Soomaaliya ee Itoobiyaanka ah ayaa ka badan 3000kun oo Askari, waxayna ka dhigan tahay tiraddii ugu badnayd oo halmar laga saarayo gudaha dalka, tan iyo markii ay Itoobiyanka ka baxeen Soomaaliya.
Wasaaradda difaaca ee Itoobiya ayaa doonaysa in ay ciidamadan u daad-gurayso dagaalka ka socda gobalka Waqooyiga ee Tigree-ga, waxayna muujinaysaa walaaca ah in dagaalka deg deg loo soo afjaro, iyadoo ay soo baxayaan macluumadyo kala duwan.
AMISOM ayaa ka welwelsan talaabada bixida ciidamada Itoobiyaanka ee caawinta u joogay gudaha Soomaaliya, kuwaas oo aan xaquuq ka heli jirin Midowga Afrika, balse howlgalada muhiimka ah qeybta ka noqon jiray sida ay sheegayan wararku.
Itoobiya ayaa saameyn muuqato oo ciidan ku lahayd gudaha Soomaaliya, gaar ahaana Koonfurta dalka oo ay goobaha xaduudaha ku dhaw kusugnaayeen ciidamadooda ugu badan, yoolkuna ahaa ilaalinta Xaduudaha ay la wadaagto gobalada Soomaaliya.
WARBIIXN HORE PUNTLANDTIMES
Itoobiya oo doonaysa inay kumanaan ciidankeeda ah kala baxdo Somalia haddii uu sii socdo dagaalka TPLF.
“Ninkii dhoof ku yimid baa Geeridu dhibaysaa
Wuu dhaqaaqi doonaa
Dhulka sow anigu malihi?
Dhirta sow anigu malihi?”
Waxaan ka xumahay in Itoobiya ciidankeeda la baxday waqtigan hadda la joogo. Waxaan doonayey inay sii joogaan ilaa Itoobiya isku baaba’ayso, oo markii ay ku dhacdo cir-kaa-dheer dhul-kaa-dheer aan hubka kala harno kadibna u sheegno inay meeshay doonaan aadaan. Waxaase dhici karta inay tahay xikmad iyo naxariis Alle sababtoo ah hubkaas haddii uu gacanteenna galo inaan innagu isku gumaadno baa dhici kari lahayd.
Qorshihii iyo damacii Itoobiya ka lahayd dhulka iyo badda Soomaaliyeed ee ay ciidanka badda u sameysatay waa sii dhimanayaa, mana filayo inuu soo noolaan doono, Inshaa Allaah.
Shaki la’aan inay dhabarjab ku tahay Farmaajo iyo damaciisa kursi jecalka iyo keligitalisnimada oo uu maanta gorodda laalaadinayo. Degaannada ay Itoobiyaanku ka baxeenna waxaa qabsan doona Al-Shabaab, beelihii Itoobiyaanka ku tiirsanaana maanta ayey ka warbogi doonaan. Labada degaan ee isdifaaci kara waa Puntland iyo Jubbaland. Bal aan aragno waxa ay qabtaan ciidankii Farmaajo ku daadgureeyey Gedo.
Waxaan kula talin lahaa Baarlamaan ku-sheegga inay fursaddan uga faad’iidaystaan inay soo saaraan go’aan mamnuucaya in ciidan ajanabi — xitaa haddii ay wataan magaca AMISOM — aanu soo gali karin Somalia iyadoo aanu oggolaan Baarlamaanka Somalia. Waa in loo hawlgalaa in aan ciidanka Itoobiya dib ugu soo noqon dalkeenna.
ANBA DHAMAY QARAARKEE WAA INAAD DHADHAMISAA!!!!
Marka hore salaan gudoon,waar ninyow waxaaba lamoodaa in dadka somalidu ayba la qabsadeen Xabashinimada ama Ethiopia’nimada cajiib oo cajiib.
Waxaan arkayey somali badan oo falanqaynaya dagaalka Amxaarada iyo tigreega iyo qaar badan oo kala taageraya bal halkay lamarayso Maryooley Eega, cajiib bal maxaa ka galay dagaal dalkale ka socda bal dalkoodan baa’bay ee fowdada ah dhinac walba may ku mushquulaan oo xal u raadiyaan War Ileyn Taanoo Kale.
Ararow waa sidaa aad sheegtay maanta koonfur Chance aad u muhiima ayay haystaan oo ah in laga maarmo amxaar danbe dibna loosoo celin, lana sameeyo waxkasta oo aanay dib ugu soo noqon Amxaaro injirleey marmarsiiyo kasta oo ay la yimaadaana laga hortago ciidan somali ah hadii la helayo lagu bedelo.
Midbaanse ka baqayaa oo ah in sidii hore u dhacday ilaa hada socota oo ah Somalidii oo kala Aamin baxday ayna adagtahay inay is Aaminaan markaa halkaa waxa kasoo gelaya in Amxaarada ay marwalba noqdaan sheekadii caanka ahayd ee Cadowgeyga cadowgiisa waa Saaxiibkay.
Ethiopia xalkeedu wuxu maraya meel adag laakiin umalayn maayo inay u baa’bayso sida somalida waayo waxay leeyihiin Garab kala gaadha ama caawiya oo ah Gaalada aduunkan ku kibirtay wax iska celiyana weydey, gaaladu xal koley way u keenayaan xabashida hamigooduna waa halkoodii oo ah in la gumeeyo somalida waayo somalidu waa hilbo wadhan cid iyo ciirsina mahaystaan Dalkoodii iyo diintaba Qabyaalad iyo xin iyo kuxumee ayay ka doorteen.
Inshalah Ilaahay dhibka Xabashida Haynaga Hayo Dhibkoodana ilaahay hayna baalmariyo.
Dagaalka Xabashidana waxaan ka leeyahay Waa lagu digtaa Ruux Haduu kuu Darnaan jirey.
Oo maxaa iiga Gidiisha Laba Gaal oo isdilaaya.
Intaa aad sheegtay waan kugu waafaqsanahay. Nasiibdarro, Soomaali haddii aan nahay waxaan nahay dad dhoohan oo meel dhow wax ka eega. Waxaan arkay bannaanbaxyo ka dhacay Jigjiga oo lagu taageerayo weerarka Abiy ku qaaday Tigreega. Waan fahmi karaa dadka waxaa ku cusub xusuustii tacaddigii Tigreega laakiin waxay illoobeen in Amxaaro ku haysay tacaddi iyo gumeysi 150 sano, haddana haddii ay jebiso Tigreega ay khatar tahay in xukunkii Amxaaradu soo noqdo. Soomaalidu meel kasta oo ay joogto waxaa la gudboon inay yiraahdaan oraah aan carruurnimadii oran jirney: Alloow, labo dibi isku jaanjaan oo mid noo jebi aan jigjigannee.
Runtii, Itoobiya inay burburto ama Amxaaro xukunka kusoo noqoto dani uguma jirto Soomaali. Waxaa dani ugu jirtaa iyadoo kala adkaanweyda oo isku tabarbeesha kadibna heshiisa oo noqota dal dimoqoraadi ah oo qowmiyad kasta xor u tahay inay sameysato axsaab u gaar ah dabadeedna dalka lagu xukumo isbahaysi (coalition). Markaas ayaa iyaduna kala badbaadaysaa, Soomaalina ka badbaadaysaa. Tan kale, waa inaan xusuusannaa in shacabka Itoobiya in ka badan 60% yihiin muslimiin isla markaana leeyihiin dhulka ugu ballaaran Itoobiya laakiin ay yihiin dadka ugu saboolsan uguna dambeeya dhan walba.
Waa kugu raacsanahay in gaaladu ku dadaali doonaan inay ku kala hagoogtaan Itoobiya. Trump isagu dan kama laha African islaynaya, haddana waaba qarracnsan yahay. Rajadoodu waa EU iyo waagii Joe Biden talada la wareego.
Ugu dambeyn, kumannaan ciidan Itoobiya ah oo waa wata magaca AMISOM ayaa weli jooga Somalia, Abiyna ma saari doono ilaa xaalad adag kasoo wajahdo gudaha Itoobiya iyo dagaalka Tigreega. Intay ku sugan yihiin gudaha Soomaaliyana, waa jiri doona damaca Itoobiya ee dhulka iyo badda Soomaaliyeed.